यसरी गरौं कारको सुरक्षा
हामी आफ्नो शरीरलाई चुस्त, स्फूर्त र तन्दसरुस्त राख्नका लागि नियमित व्यायम गर्छौ । खानपानमा ध्यान दिन्छौं । स्वास्थ्य परिक्षण गराउँछौं । तर, हामीले प्रयोग गरिरहेको सामग्रीलाई कसरी सुरक्षित राख्दै लामो समयसम्म टिकाउने ? यस सम्बन्धमा खासैं ख्याल गर्दैनौं । खासगरी यहाँ आफ्नो कारको टिकाउ र सुरक्षाका लागि अबलम्ब गर्न सकिने उपायहरु सिकाउने कोशिष गरिएको छ ।
कारको पुरै पर्फमेन्स इन्जिनमा निर्भर रहन्छ । अतः इन्जिनलाई सहि दंगले संचालन गर्नका लागि सहयोग गर्छ, इन्जिन आयलले । यसैले हरेक १५–२० दिनको अन्तरालमा परीक्षण गरिरहनुपर्छ । कतै कारको आयल त लिक भइरहेको छैन ? हेर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो अवस्था भए तुरुन्तै मेकानिक्स कहाँ चेक गराउनुपर्छ, अन्यथा खतरा हुन सक्छ ।
कारमा घर बाहिर निस्कनुपूर्व टायरको हावाको प्रेसर एक पटक जाच्नु पर्छ । यदि टायरको हावा कम भए त्यसको सम्पूर्ण भार इन्जिनमा पर्न जान्छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा कारको माईलेजनमा प्रभाव पार्दछ । यसका साथै स्वयं टायरलाई समेत नोक्सान पु¥याउँछ । यसमा अतिरिक्त घर्षण हुन गई टायरको आयु छोट्टिन्छ ।
कारको ब्रेक ठीक छ वा छैन चेक गरिरहनु पर्छ । खासगरी वर्षयाममा ब्रेकमा चाँडै समस्या आउने गर्छ । साथै ब्रेक लगाएतको समयमा आवाज निस्कन थाल्यो भने पनि त्यसमा शंका गनुपर्छ । यदि ब्रेक नियमित रुपमा चेक गरिएन भने यो तपाईका लागि घातक सावित हुन सक्छ ।
गर्मीको समयमा कारको इन्जिन तातिने समस्या हुन्छ नै । यद्यपी यसमा सतर्कता अपनाउनु भने पर्छ । त्यसैले तपाईले आफ्नो कारको रेडिएटरमा कुलेन्टको मात्रा निरिक्षण गरिरहनुपर्छ । हरेक २–३ दिनमा कारमा वाटर कुलेन्टको जाँच गर्नुपर्छ ।
यदि तपाईलाई विना काम पनि क्लच दबाउने बानी छ भने क्लच ड्यामेज हुनसक्छ । यसका साथै क्लचमा कुनै समस्या छ÷छैन, नियमित चेकअप गर्नुपर्छ ।
अस्वस्थकर खानाले हाम्रो स्वास्थ्य विगार्छ । त्यस्तै, अशुद्ध पेट्रोलले गाडीको इन्जिनलाई नोक्सान पु¥याउँछ । अरुभन्दा पनि अशुद्ध पेट्रोलका कारण कारको इन्जिन छिटै विग्रिन्छ । प्रयास गरौं कि, यस्तो पम्पमा फ्यूल भरौं, जहाँ शुद्ध पेट्रोल पाइन्छ ।
कतिपय अवस्थामा सामान्य फ्युज जस्ता कुराले पनि कार बन्द हुन्छ । यसैले कतै जानुअघि कारमा एक्स्ट्रा फ्युज राख्ने गरौं । सामान्यतः फ्युज बदल्नु गाहे हुन्न, कतै फ्युज फुत्किएमा त्यसलाई बदल्न सकिन्छ ।